XOG: Garsoorka Puntland oo isbedel mug-weyn lagu sameynayo & Kiisas laysku haysto.
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes ayaa ogaaday in uu jiro isbedel mug-weyn oo lagu sameyn doono Hay’addaha garsoorka ee Puntland, gaar ahaana maxkamaddaha Sare, Racfaanka iyo tan ciidamada Qalabka sida ama Dambiyada culus oo dhamaantood dood adag ka taagan tahay.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa balan-qaaday dibu eegis lagu sameynayo arrimaha ku saabsan Garsoorka Puntland, oo inta badan ay kajiraan cabashooyin la xariira xukumada ay ridaan oo ay dad badan dood ka keenan.
Ilo ku dhaw dhaw Madaxtooyada Puntland ayaa u sheegay PuntlandTIMES in isbedelkan uu saameyn weyn reebi doono, waxaana kiisaska ugu badan ee hadal-heynta sababay ay ka mid noqdeen dad laga sii daayay Xabsiyada Puntland.
Xabsiyada ayaa la rumeysan yahay in dad badan laga sii daayay, kuwaas oo aan dhameysan mudada xukunkooda, sidaas oo kale xukumada ka sokow go`aamada ay gaareen ayaa la dhaliilay.
Maxkamadda ciidamada Qalabka sida ayaa lagu tuhmayaa in ay xukumada qaarkood u martay hanaan aan daahfurneyn, waxaana socota wali dabagal ku wajahan xukumada qaarkood oo ay gaartay.